KEDU KA E SI ASỤ ASỤSỤ TWEET NA RUSSIAN - TWITTER - 2019
Enwere ọtụtụ mmemme nke na-enye gị ohere nyochaa steeti kọmputa ahụ ma gbanwee ụfọdụ akụkụ nke usoro ahụ. Ọtụtụ ndị ọrụ kwenyere na Spidfan bụ otu n'ime mmemme kachasị mma na mpaghara a, mana otu ajụjụ dị mkpa ka dị: otu esi eji ngwa Speedfan.
N'ezie, ọ bụrụ na ajụjụ dị otú ahụ bilitere, ọ dịghị mkpa ikwu banyere ntọala miri emi na mgbanwe na mpaghara ọ bụla dị ịrịba ama. Onye ọrụ naanị mkpa ịma otú e si arụ ọrụ dị mfe ma nyochaa steeti kọmputa ya n'enweghị nsogbu.
Download ngwa ngwa nke Speedfan
Ịgba ọsọ ngwa ngwa
N'ụzọ bụ isi, a na-ebudara Spidfan iji mee ka ọsọ nke ntụgharị nke ndị na-ekpo ọkụ na-agbanwe ya ma si otú ahụ gbanwee ụzụ ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ nke usoro ihe odide ahụ. Ya mere, onye ọrụ ahụ aghaghị ịmụta ịrụ ọrụ na Fans. A na-eme ihe niile na ntanetị mbụ, naanị ị ga-achọ ịma onye na-eji nlezianya ọ bụ iji gbanwee ọsọ ahụ n'enweghị nsogbu.
Ihe omumu: Otu esi gbanwee ọsọ nke ngwa nju oyi na Speedfan
Maka ịrụ ọrụ dị mma, a na-atụ aro ịhazi usoro Spidfan maka ọdịmma gị. Na ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile: site na fan na-ejikọta na ọdịdị na ọnọdụ ọrụ. Atụla egwu ịhazi usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ihe mmụta ma ghọta ihe niile.
Ihe omumu: Otu esi eme ka Speedfan guzosie ike
Speedfan nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere mpaghara ọ bụla nke usoro ahụ ma nye gị ohere ịzie ọtụtụ ihe. Mana ndị ọrụ nkịtị ekwesịghị ịbanye na nkọwa, naanị ha dị mkpa ka ha mụta otú e si edozi usoro ihe omume ahụ, ka ị ghara inwe mgbagwoju anya mara ọnọdụ nke usoro ahụ ma gbanwee na steeti a.